ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းအတွက် ဦးပိုင်ကုမ္မဏီကနေ သိမ်းယူထားတဲ့ တောင် ၃၃ လုံးထဲမှ လိပ်ခွံတောင်ကို မတ်လ ၇ ရက်နေ့ ည ၇း၀၀ နာရီမှာ ဒေသခံလယ်သမား ၁,၀၀၀ လောက်က ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သည့် မြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းအတွက် ဦးပိုင်ကုမ္မဏီကနေ သိမ်းယူထားတဲ့ တောင် ၃၃ လုံးထဲမှ လိပ်ခွံတောင်ကို မတ်လ ၇ ရက်နေ့ ည ၇း၀၀ နာရီမှာ ဒေသခံလယ်သမား ၁,၀၀၀ လောက်က ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သည့် မြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:34 AM
တကယ်နစ်နာ လို့ ဝင် ပါသူတွေ ရှိသလို အ ချောင် လိုချင် လို့
စားပေါက် ရှာချင် လို့ ဝင် ပါသူတွေပိုများတယ်
ဘေးက နေ အားပေးသလိုလို အမှန်တရား ဘက်တော်သားကြီး
တွေလိုလို ဝင် လုပ်တဲ့ လုပ်စားသမားတွေ က လဲ တပုံကြီး။
ဒါတွေကို ခွဲခြား မ မြင် တတ်ကြဘူးး
ရန်ကုန်မှာ အိမ်ယာစီမံကိန်းမြေကို ဝင် ကျူးကျော်သူတွေ,,
မအူပင် မှာ ဖြစ်တဲ့ လယ်မြေ ပြဿနာတွေ,,ကို ကြည့်လိုက်
တကယ် နစ်နာသူကနဲနဲ အ ချောင် သမား စိတ်တွေနဲ့ ဝင် လု
အစိုးရ ကို ရော ဒီမို က ရေစီ တကယ်လိုချင် တဲ့ ပြည်သူကိုရော
တကယ် အ နှောက်အယှက် ပေးနေတာ ဒီလို လူတွေပဲ
ဒီအချိန်မှာ ဘေးတီး ပေးပြီး သူရဲကောင်းဝင် လုပ်,နာမည်ယူချင် သူတွေရဲ့ အကြိုက် ပဲကွ။
မအူပင် ပြဿနာ မှာ စုစုနွေး လို လုပ်စားမ မျိးတွေ
အကြိုက် ဖြစ် သွားတယ်။
နှစ်ဖက် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်း နေတဲံ့ အချိန်မှာ
ကယ်တင် ရှင် မကြီး ပုံစံ ဖမ်းပြီး ဂွင် ရိုက် တော့တာပဲ
သမ္မတ ရော အစိုးပိုင်း ရော အားလုံးဘေးကျပ် နံကြပ်နဲ့
ကြိုးစားပြုပြင် ပြောင်းလဲ နေချိန်မှာ ဒီလို မြေ ခွေးမျိုးတွေကို
ရှင်း ပစ် ရမယ်
ဘဘကြီးဆိုတဲ့ကောင် မင်းကိုတခုပြောမယ် ။ ရန်ကုန်က ကျူးကျော် သူနေထိုင်သူတွေနဲ့ လက်ပံတောင်က တောင်သူတွေကို သွားပြီး နှိုင်းလို့မရဘူး လေ ။ မင်း အဲလောက်တောင် မကြည့်တတ်ဘူးလား ...အဲဒီလို ကျူးကျော် နေထိုင်တယ်ဆိုတာ ဆင်းရဲတဲ့ ဗမာပြည်မပြောနဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ် အဲတာကို ခင်များ သဘောပေါက်။ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်နေထိုင်သူ အိမ်ခြေမဲ့တွေအပေါ် အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှု မိုက်ရိုင်းတာနဲ့ အေးအေးလူလူ ဖြေရှင်းပေးတာကလွဲလို့ တခြား ဘာကွာဟ မှုမှမရှိဘူး ။လက်ပံတောင် ...အဲဒီ မြေကြီးတွေကို ...ဟိုး ဘိုးဘွား တွေလက်ထပ်ကတဲ့က စိုက်ပျိုးထွန်ယှက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကျတဲ့ ကျေးဇူးရှင် တောင် သူကြီးများကတာ ဒီမြေရဲ့ အကောင်းအဆိုး အကျိုးအပြစ်ကို ခံစားခွင့်ရှိရမယ်။ တခြား ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေပါစေ မတရား သိမ်းယူ ဖျက်စီး လုပ်လို့ မရဘူး ဒီမြေပေါ်မှာ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေ လာရှာဖွေလို့မရဘူး... ဒါပြည်သူနဲ့ အဲဒီ တောင်သူများကတာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေကွ ။ ဒါကို ဘုရား မရှိ တရားမရှိတဲ့ လောဘသားကောင် တိုင်းတပါးသား စောက်တရုတ်တွေ နဲ့ တရုတ်ရဲ့ ငယ်ကျွန်တွေဖြစ်တဲ့ စစ်ခွေးငမိုက်သားတွေ လက်တစုပ်စာ လူအနဲငယ်ကသာ မတရား ကျူးကျော်မှုကြောင့် ဒီလိုတွေ ဆနပြနေရတယ် ထုတ်ဖော် တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်
ဆိုတာကို မင်း ထမင်းစားပြီးကြီးတဲ့လူဆိုရင် နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
အေးပေါ့ကွာ ...ဒီလို စောက်ကျိုးမရှိတဲ့ ဘောင်းဘီချွတ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကြီးကို လက်ရှိ အစိုးရက
ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ယူနေရရှာတယ်တဲ့။
ဲအဲလို့ ထင်တဲ့ အပေါ်ကကောင်တွေ ငါမင်းတို့ကို အကြံကောင်းလေးပေးပါရစေ။မင်းတို့တွေ အိမ်ကိုတာ အရင် ပြန်ကျပါ။ ကို့မိသားစုကို အကောင်းဆုံး တွေးခေါ်ပြောဆိုတတ်အောင် .. မတရားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မတွေးမိကျအောင် ကို့မိသားစုရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအစတွေကို သွားပြုပြင်ပေးသင့်တယ်။ မဟုတ်ရင် မင်းတို့ အခုရေးထားတဲ့ ကော်မန်းတွေထဲကလို .. ကိုချင်းစာ တရားမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေလိုပဲ...မတရားသူကို အာဗြဲ လျှာဖြဲ ထောက်ခံ အားပေးတတ်ပြီး.. အားနဲသူကို မတရား သဖြစ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျတတ်တဲ့ အောက်တန်းစား အတွေးအခေါ်တွေ တွေးခေါ်မိကျမှာဆိုးလို့ပါ။ မင်းတို့ ငါပြောသလိုသာ အိမ်ပြန်ပြီး အရင်လုပ်ကျပါကွာ.။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ ဦးပိုင်ကြီးရဲ့ လခစား ကော်မန်းရေးသူတွေဆိုရင် လဲ ဆက်သာရေးကျပေါ့ကွာ ဟုတ်ဘူးလာ..။
၇ခိုင်အေ၇းစုံစမ်းေ၇းအဖွဲ့တို့ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း စုံစမ်းေ၇းအဖွဲ့တို့ဆိုတာတွေကို အစိုး၇ပိုင်း၇ဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေများ ၇ှိနေသလား။ သို့မဟုတ် သူတို့ကိုယ်တိုင်က အချိန်ဆွဲနေကြတာလား မသိတော့ဘူးကွာ။ ။
မင်းတို့ အဆင့်က အဲဒါပဲကွ
ကိုယ်နဲ့ အမြင် မတူတာနဲ့ စစ်ခွေးပြောလိုပြော
မင်း တို့ကိုယ်တိုင် က အ ချောင်နေ အ ချောင် စား
သမားတွေမို့ အ ချောင် သမားတွေဘက် က နာနေတာ။
တကယ်နစ်နာသူတွေလဲ ရှိသလို ရောယောင် နေတဲ့
အ ချောင် သမားတွေ ခါတော်မီလုပ်စားသူရဲကောင်းတွေ
ကို ခွဲပြီး မမြင် တတ်တဲ့ မင်းတို့ နလပိန်းတုံးတွေကြောင့်
ပြဿနာတွေ ပိုကြီးသကွ။ ရှင်းလား
ငါပြောချင် တာက တကယ်နစ်နာသူတွေ နဲ့ အ ချောင် သမားတွေကို ခွဲခြားမြင် တတ်ဖို့ ပြောနေတာ ဟဲ့
မြက်စားပြီးကြီးတဲ့ နွား ရဲ့...
မင်း မိသားစုကိုသာ အ ချောင် သမားစိတ်တွေ မရှိအောင် ပြုပြင် ပေးလိုက် ပေ တော့ ကွာ
မင်းလို အဆိုးမြင် စိတ်တွေ မရှိအောင် ရောပေါ့
အဲဒါကြောင့်သူများကို လုပ်စားမ လို့ပြောတာမလား
သူများကိုနွားလို့ပြောရင် ခင်ဗျားကတော့ ဖားပဲဖြစ်မယ်
ဒီလက်ပန်းတောင်တောင်စီမံကိန်း က တိုင်းပြည်အတွက်ကြီးပွားရေးလား
ပြည်သူအတွက် ကြီးပွားရေးလား ဘယ်သူ့အတွက်လဲ
knife wafer said...
ဒီပဋိပက္ခ ဟာ စစ်အာဏာရှင် (ယနေ.တိုင်ရှိဆဲ) ယန္တရား
ကြီး ရဲ.လက်ဝါးကြီးအုပ် အနိုင်ကျင်.မှုများထဲက တစ်ခု
ကို မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဒေသတစ်ခုက ပြည်သူတစ်စုရဲ.
အာခံဆန်.ကျင်မှု ဖြစ်ပါတယ် ၊ အင်အားချိန်ခွင်၇ှာကတော.
အမှန်ကို မပြောဝင်.၊ မဝေဖန်ဝင်.ကြသူတွေလည်းအတော်၇ှိ
ဒီ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ဒေသလေးတစ်ခုက ကိစ္စဘဲ ပြည်သူတွေက
ငါတို.နဲ.မဆိုင်ဘူး ဆို၇င် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူတွေနဲ.
သားစဉ်မြေးဆက် တွေဟာ (အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ)
စစ်ကျွန်ဘ၀ ဆက်နေကြရအုံးမှာပါ ။ ။ ။
အားလုံးနဲ.ဆိုင်တဲ.ကိစ္စ ပါ ။